Kumuu ahaa Wasiirkii hore ee Arrimaha dibadda Itoobiya ee la dilay? - BBC News Somali
Seyoum Mesfin wuxuu Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Itoobiya ayaa intii u dhaxeysay 1991-kii ilaa 2010-kii
Seyoum Mesfin, Wasiirkii hore ee Arrimaha dibadda Itoobiya
Abiy Axmed, muxuu u dagaal geliyay ciidamadiisa?
Seyoum Mesfin wuxuu kaalin weyn ku lahaa siyaasadda Itoobiya ee ku wajahan dalka dariska la ah ee Soomaaliya
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, ayaa 4-tii bishii November amar ku bixiyay in dagaal cirka iyo dhulka ah lagu qaado gobolka Tigray si loo afgambiyo xukunka xisbiga TPLF. Dagaalka ayaa billowday kaddib markii ay xoogagga Tigray-ga weerar ku qaadeen saldhig ay gobolkaas ku lahaayeen milatariga Federaalka.
Wasiirro Puntland oo isku gefsan qorshaha 2040-ka iyo qoysaska badan